Kacaankii Mareykanka - 1763 illaa 1789
Buugaagta Kacaanka Mareykanka
Khariidadaha fikradda kacaanka Mareykanka
Cinwaanka Kacaanka Mareykanka #1
Cinwaanka Kacaanka Mareykanka #2
Cinwaanka Kacaanka Mareykanka #3
Cinwaanka Kacaanka Mareykanka #4
Cinwaanka Kacaanka Mareykanka #5
Cinwaanka Kacaanka Mareykanka #6
Cinwaanka Kacaanka Mareykanka #7
Cinwaannada Kacaanka Mareykanka
Dukumiintiyada Kacaanka Mareykanka
Su'aalaha Qoraalka Kacaanka Mareykanka
Sawirrada naqshadaha Mareykanka
Taariikhyahannada Kacaanka Mareykanka
Kediska Kacaanka Mareykanka #1
Kediska Kacaanka Mareykanka #2
Kediska Kacaanka Mareykanka #3
Kediska Kacaanka Mareykanka #4
Kediska Kacaanka Mareykanka #5
Kediska Kacaanka Mareykanka #6
Qiimaynta kacaanka Maraykanka
Oraahyada kacaanka Mareykanka
Waqtiga Kacaanka Mareykanka
Mawduucyada Kacaanka Mareykanka
Kacaankii Ameerika yaa ahaa
Wordsearch-ka American Revolution - fikradaha
Ereyga Kacaanka Mareykanka - dhacdooyinka
Hal-ku-dhigga Kacaanka Mareykanka - dadku
Erey-bixinta Kacaanka Mareykanka - meelaha
Erayadii Kacaanka Mareykanka
The Kacaanka Mareykanka wuxuu bilaabmay bartamihii-1760s asagoo caasi ah gumaystayaashii Ingiriiska ee ku noolaa hareeraha xeebta bari ee Waqooyiga Ameerika. Waxay ku dhammaatay 1789 iyadoo la abuurayo ummad cusub, oo ay xoojinayaan dastuur qoran iyo nidaam dawladeed oo cusub.
Kacaankii Mareykanku wuxuu saameyn weyn ku yeeshay taariikhda casriga ah. Waxay ka hortimid oo wiiqday awoodda saxda ah ee Boqortooyada Yurub. Waxay boqortooyadii Ingiriiska ku beddeshay dawlad shaqeyneysa oo ku saleysan mabaadii'da Iftiiminta ee jamhuuriyadda, madaxbanaanida caanka ah iyo kala saarida awoodaha.
Kacaankii Mareykanku wuxuu muujiyey in kacdoonada ay guuleysan karaan iyo in dadka caadiga ah ay iskood wax u xukumaan. Fikradeeda iyo tusaalooyinkeeda ayaa dhiirrigeliyay Kacaankii Faransiiska (1789) iyo ka dib wadaniyiin iyo dhaqdhaqaaqyo madax-bannaan. Tan ugu muhiimsan, Kacaankii Mareykanka wuxuu dhashay Mareykanka, oo ah ummad qiima siyaasadeed, xoog dhaqaale iyo awoodo millatari sameysay oo qeexay adduunka casriga ah.
Sheekada Kacaanka Mareykanka waa mid ka mid ah isbeddelada deg degga ah iyo horumarka. Kahor 1760s, 13 gumaystaha Mareykanka ayaa ku raaxeystay tobanaan sano barwaaqo dhaqaale iyo xiriir wanaagsan oo lala yeesho Ingiriiska. Dadka Mareykanka badankood waxay naftooda u arkaa inay daacad u yihiin Ingiriiska; Waxay ku qanacsan yihiin inay noqdaan maadooyinka boqornimada xariifka iyo naxariis ee Boqortooyada Ingiriiska marka loo eego addoonsiga iyo vassals-ka shisheeyaha shisheeyaha ah. In kacaanku ka dhex muuqdo bulshada gumeysiga Ameerika waxay umuuqdeen wax aan laga fiirsan.
Intii lagu jiray bartamihii-1760-yada, daacadaas Boqortooyada Ingiriiska waxaa lagu tijaabiyay arrimo umuuqda kuwa caqli gal ah: is-afgaranwaaga iyo doodaha ku saabsan siyaasadaha dowladda iyo canshuuraha. Toban sano gudahood, beeralleyda Mareykanka waxay ku hubeysnaayeen muruqyada iyo xardho iyo iyagoo u dagaallamaya dagaalka ka dhanka ah ciidammada Ingiriiska ee Lexington, Massachusetts. Bartamihii-1776, siyaasiyiinta Mareykanka waxay u arkeen tixgelintii Ingiriiska sidaas darteed si aan kala go 'lahayn ayey u jabeen inay u codeeyaan madax-bannaanida. Madax-bannaanidaasi waxay la timid laba caqabadood oo kala ah: dagaal lala galo Ingiriiska, quwadda militari ee ugu weyn adduunka, iyo baahida loo qabo nidaam dowladeed cusub. La kulanka caqabadahaas ayaa calaamad u ahaa wejigii ugu dambeeyay ee kacaankii Mareykanka.
Websaydhka Shabakadda Kacaanka Ameerika ee Alpha Taariikhda waxaa ku jira boqolaal ilo hoose iyo kuwa sare ah si ay kaaga caawiyaan inaad fahanto dhacdooyinka Ameerika inta u dhaxaysa 1763 iyo 1789. Naga bogagga mowduuca, oo ay qoreen macallimiin khibrad leh iyo taariikhyahanno, waxay bixiyaan soo koobitaan kooban oo ku saabsan dhacdooyinka muhiimka ah iyo arrimaha. Waxaa lagu taageeraa agabka tixraaca sida waqtiyada, Qaamuusyada ereyada, astaamaha taariikh nololeed, khariidadaha fikradda, qiimaha, taariikh nololeed iyo astaamo caan ah taariikhyahanada. Websaydhkeenna sidoo kale waxaa ku jira waxqabadyo badan oo khadka tooska ah sida cinwaannada ereyga iyo xulasho badan su'aalaha, halkaas oo aad ku tijaabin karto oo aad dib ugufiiri karto fahamkaaga Mareykanka ee kacaanka.
Marka laga reebo ilaha aasaasiga ah, dhammaan waxyaabaha ku jira websaydhkan waa “Taariikhda Alpha 2015-19. Waxyaalahaan lama koobi karo, lama daabicin karo ama dib looma qeybin karo iyadoon la helin ogolaanshaha muuqda ee Taariikhda Alfa. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan isticmaalka bogga Alfa Taariikhda iyo waxyaabaha ku jira, fadlan tixraac kuwayaga Shuruudaha Isticmaalka.
1765 in 1773
1774 in 1776
1777 in 1783
1784 iyo wixii ka dambeeya
Ku saabsan boggan:
Kacaankii Mareykanku wuxuu ka kooban yahay maqaallo, ilo iyo aragtiyo ka hadlaya dhacdooyinka Ameerika inta u dhaxaysa 1763 iyo 1789. Boggan waxaa abuuray oo dayactiray Taariikhda Alpha waxaana ku jira ereyo 100,000 ah bogagga 200. Macluumaad dheeri ah, booqo page FAQ or Shuruudaha Isticmaalka.